Ikhabhinethi entle ngasechibini
I-10 km ukusuka e-Isaberg. Ukutyibiliza, ukuHamba intaba kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni. Ikhabhathi entle kwindawo entle yendalo kufutshane neGislaved. Ikhabhinethi ibekwe ngasechibini. Ungasebenzisa isikhephe simahla. Ikhabhinethi ikhanya kakhulu kwaye inobuhlobo. Ikhabhinethi inomatshini wokuhlamba izitya, ibhafu kunye nendlu yangasese.
Iyamangalisa ehlotyeni nasebusika. Iikhilomitha ezili-10 ukusuka e-Isaberg-Ukuhamba intaba, ukutyibilika kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni. Kumnandi kakhulu kubantwana.
Ibekwe ecaleni kwechibi kwindalo yaseSweden- siyakwamkela kwikhabhinethi yethu eSweden ebizwa ngokuba yi "Lillstugan." (NgesiNgesi kuthiwa yiNdlu yeeNdwendwe) :-)
Ngaphambi kokuba ufike uqhuba kwindlela enkulu, kwaye emva koko ujika kwindlela encinci apho kukho i-cabin. Malunga neemitha ezingama-400-500 ukusuka kwiNdlela enkulu. Kulula ukufumana- kwaye usondele kwi-Gislaved - malunga ne-5 km- apho kukho iivenkile ezininzi (Willys, Lidl, Coop, ICA) kwaye kukho iivenkile zempahla (Lindex, Kappahl, Azzuro, Dressman), ivenkile yotywala, iikhemesti njl. .
Inxalenye encinci ye-cabin inembali emva konyaka we-1920. Ukususela ngoko kukho ukwandiswa okukhulu kwendlu - kwaye i-cabin ibonakala isesimweni esihle. Sihlaziya ikhabhinethi ngokuqhubekayo ukwenza ikhabhinethi ibentle ngakumbi kunokuba injalo- siza kuhlala sihlaziya ngemifanekiso.
Ubume bendlu ngumxube wesitayile saseSweden kunye nesiDanish esixutywe nezinto ezininzi ezintsha kunye nezinto ezininzi zakudala.
Ikhabhinethi inesixhobo sokuhlamba izitya, indlu yangasese, ishawa, ifriji encinci kunye nesitovu. Itanki yamanzi ashushu ziilitha ezingama-30 kuphela- ngoko ke abantu abathandathu abanako ukuhlambela nje emva komnye, kodwa abantu aba-2-3 kanye emva komnye bayakulunga. :-)
Kukho izitulo ezithathu zabantwana- ezimbini ku-0-2 ubudala kunye nesinye sabantwana abaneminyaka emi-2-5 ubudala.
Ngaphaya koko kukho izityalo ezininzi zeblueberry ezibekwe kufutshane nekhabhathi, Zive ukhululekile ukuzitya- zininzi ze-antioxidants. Ukuba unethamsanqa unokufumana i-chanterelles ehlathini.
Abamelwane ngamaSweden kwaye bahlala ngokusisigxina. Ikhabhinethi ibekwe kufutshane nabamelwane- kodwa abakwazi ukubona ikhabhinethi yemithi kwaye unokuhlala kwiveranda (terrass) kwaye uhambe ujikeleze egadini ngaphandle kokuphazamiseka.
Ikhabhini inabamelwane kuphela ekunene- ekhohlo kukho ihlathi / umhlaba.
Kufuphi nekhabhinethi- malunga neemitha ezingama-400 kukho ulwandle oluhle kakhulu loluntu kunye nebhulorho apho unokuqubha. Ungaqubha naphambi kwendlu.
Kukho ibrifkheyisi enolwazi xa ufika kwikhabhinethi nayo inolwazi malunga nendawo kunye nokuhamba. I-Isaberg ikumgama oziikhilomitha ezili-13 ukusuka kwiNdlu kwaye zininzi iibhayisekile zeentaba kule ndawo.
Ungasoloko uqhagamshelana nathi- siya kuhlala siphendula. Sithetha isiSwedish, isiDanish kunye nesiNgesi "kunye nesiJamani esincinci".